Siyaabaha ka Mac soo dir SMS si Phones
Haddii aad u aaminsan yihiin ama ma, hadda dadka ay awoodaan in ay SMS ka computer soo dir telefoonada. In article kale, Tifaftiraha ayaa ku xusan sida loo diro fariimaha qoraalka ah ee PC ah . Hadda waxaan jeclaan lahaa in aad soo bandhigto sida ay u soo diraan farriimaha qoraalka ah ee Mac. Dhab ahaantii, siyaabaha loo diro fariimaha qoraalka ah ee Mac way kala duwan yihiin sida ay nooca telefoonka aad isticmaalayso. Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa:
Part1: Sida loo diro fariimaha qoraalka ah ka Mac marka aad isticmaalayso iPhone ah
Qaybta 2. Sida loo SMS ka Mac diro marka aad isticmaalayso telefoonka ah Android
Qaybta 1. Sida loo diro fariimaha qoraalka ah ka Mac marka aad isticmaalayso iPhone ah
Haddii aad isticmaalayso ku 6s iPhone dambeeyay, iPhone 6s Plus ama wax iPhone hore kaasoo kara inuu socda ee macruufka dambeeyay 9.0, iyo Mac waa in ay OS X 10.11 (El Capitan), ka dibna ay awoodaan in ay soo diri SMS Mac tahay in aad . Halkan waxa ku jira talaabooyin si aad u Mac loo diro loona helo fariimaha qoraalka ah ee Mac.
Tallaabada 1. Fadlan cusboonaysiiso iPhone in macruufka 9.0 ama ka dib; Kaliya la macruufka 9.0 ama qoraalkii ugu dambeeyey, waxaad sameyn kartaa in aad Mac si ay u helaan ama u soo dir farriimaha qoraalka ah.
Tallaabada 2. Waxaad hubisaa in aad Mac iyo iPhone xiran yihiin shabakad isku Wi-Fi.
Tallaabada 3. Saxeex in aad iPhone iCloud la ID Apple iyo saxiixa in aad Mac iCloud la ID isla Apple.
Tallaabada 4. aad iPhone, Settings tuubada> Messages> Text Message gudbinta, mari fursad u ON. Fadlan la soco in kaliya marka uu jiro a macruufka qalab socon ama Mac xiran shabakadda isku Wi-Fi, fursad u muuqan doonaan. Oo halkaasaannu ka, waa in aad toggle Mac sida qalabka aad rabto in aad fariimaha gudbin.
Tallaabada 5. Marka aad xulo Mac sida qalabka in ay u gudbinayaan fariimo in ay, codsi ansixinta ah waxaa loo diri doonaa, guud ahaan dhakhso ah lix-digital in Messages u Mac. Ku qor habayn ku saabsan iPhone si xubnuhu aad iPhone aad Mac, jidaynayey u helo diraya SMS and MMS fariimaha.
Taasi waa! Ka dib marka aad qotomisay aad iPhone iyo Mac sida tallaabooyinka kor ku xusan, waxaad si fudud u soo diri kartaa fariimaha qoraalka ah ka Mac. Waxaa la xiriira tirada iPhone iMessage iyo iPhone.
Si ka duwan Apple, Google ma ku siin si kasta oo ay u SMS ka Mac diro marka aad isticmaalayso telefoonka ah Android. Nasiib wanaag, oo leh qalab dhinac saddexaad, waxa kale oo aad ku diri kartaa fariimaha qoraalka ah ka Mac. Hoos waxaa ku qoran faahfaahin ah ee sida loo SMS ka Mac diri la Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) .
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) aad iskaa Mac. Waa qalab virus-free ah. Just si xor ah u rakibi. Ka dib markaas, waxaa lagu daahfuri iyo xirmaan telefoonka aad Android aad Mac via ay cable digital. Marka xiran si guul ah, waxaad ka arki kartaa telefoonka aad Android waxa lagu ogaan karaa Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac).
Tallaabada 2. Click SMS galeeysid bidix si ay awood u diraya suuqa kala fariin qoraal ah. Laga soo bilaabo dhanka midig, waxaad ka arki kartaa fariimaha qoraalka ah oo dhan waxaa lagu soo bandhigaa. On top ah, waxaa jira button ah oo lagu magacaabo 'New'. Waxaa Click, markaa waxaad samayn kartaa fariimaha cusub qoraal u soo dirto ka Mac. Si aad u dhahaan goosin ka mid ah farriin qoraal ah, guji fariin ah, markaas waa inaad ku qor karaa macluumaad cusub ee xaq u hooseysa ee suuqa.
> Resource > Mac > Sida loo soo dir fariimaha qoraalka ka soo Mac in Phones